Faka umbala kwinani elikwi-Intanethi- Indawo entle yokuFaka umbala ngenani, ufikelelo ngombala inverter kunye neskena Umbala
Guys, ngaba niyawuthanda umzobo kunye nemibala yomfanekiso? Ke, kungcono ukukhulisa ulwazi lombala wakho. Njengoko uyazi, zininzi iindawo kunye nokusetyenziswa apho unokuphucula khona ubuchule bakho bokupeyinta kwaye wenze umphumo wakho wokupeyinta. Ungayichazanga, unokufikelela kumbala ngenombolo ekwi-Intanethi, uprinte umbala ngombala okanye usebenzise umbala umbala.
Ke, ukukunceda ukhuphe udideko kunye nokukhathazeka, eli phepha liza kukubonisa indlela yokujongana nombala ngenombolo ekwi-Intanethi. Ewe, siya kukunika iisampulu ezilula zeMibala yeMibala yakho usebenzisa iindlela ezahlukeneyo ezinokukhetha imibala efana neTal Colors kunye nePastel Colors. Ke, qiniseka nje ukuba uhlala kweli phepha kwaye uyakuthanda ukufunda!
Yintoni umbala ngeNombolo?
Kulungile, kubaqalayo, kuya kuba kuhle ukuba uqhelene nombala ngenani ngokwalo. Ewe, Faka imibala ngenani lilungu elikhethekileyo elifumaneka kwimidlalo okanye nakweyiphi na iqonga lokufunda lokupeyinta. Ewe, eli nqaku likunika indawo yokupeyinta okanye yokuzoba uze ukhethe imifanekiso efanelekileyo kuyo. Ingaba uyazi? Kukho iindlela ezininzi zemibala yemibala onokuyisebenzisa.
Ngokwenyani, kuya kufuneka wenze umzobo womfanekiso onje ngeZilwanyana ezembethe. Emva koko, Faka umbala kwinombolo ye-Intanethi kwi-Intanethi eya kukunika uninzi lweeNgcaciso zoMfanekiso onokuthi ufake isicelo kuzo. Umzekelo, ungasebenzisa ulusu umbala Hex ukuyenza ibe yendalo ngakumbi. Okanye, uyilo lwePeyinti enemibala, ungasebenzisa imibala yeTech okanye umbala wePastel ngokunjalo.
Zithini izibonelelo zoMibala ngenani?
Abanye bakho banokusetyenziselwa ukuqhuba indlela eqhelekileyo yokupeyinta ofuna iipletto, itafile kunye nazo zonke izixhobo zokupeyinta. Kodwa, kule mihla, kuya kulunga ukuba uzama ukuphucula ubuchule bakho bokupeyinta ngokusebenza ngombala ngenombolo kwi-Intanethi. Nangona kunjalo, kukho ezinye izibonelelo onokuthi uzifumane kuMibala ngenombolo kwi-Intanethi kwaye nantsi:
Ekuqaleni, kuyanceda ukuba ufunde ubugcisa bokuzoba kunye nokupeyinta.
Emva koko, inikezela ngemibala eyahlukeneyo yemibala onokuyisebenzisa kwipeyinti yakho.
Umbala ngenombolo kwi-Intanethi uyafikeleleka iiyure ezingama-24 apho unokufikelela khona nangaliphi na ixesha naphi na.
Kwabaqalayo, Faka umbala kwinani likunceda ukuba ufunde kwaye uqhelisele iindlela zokupeyinta kunye nokuzoba ngeendlela ezilula nezinomdla.
Okokugqibela, eli nqaku likunceda ekubeni uyilo ngakumbi ngokuyileka uyilo lwakho lokupeyinta iKhaya, ukupeyinta ngokubonakalayo kunye nezinye ezininzi.
Zeziphi iintlobo zoMibala ngenani?
Ngapha koko, zimbini iintlobo zoMibala ngenani onokuzisebenzisa. Nokuba, nganye kuzo inezibonelelo zayo ezikhethekileyo, amanqaku kunye nezixhobo. Kodwa ngokusisiseko, Zombini ziyakunceda ukuphucula ubuchule bakho bokupeyinta kunye nemibala. Ke, nantsi:
Umbala oprintwayo ngenani
Okokuqala, ngombala oPrintiweyo ngenani ufuna iphepha lokusebenzela kunye nezixhobo zombala. Ukufikelela kuyo, unokukhuphela umbala ngeNombolo yeKhomputha ye-Intanethi kwiiwebhusayithi ezahlukeneyo. Emva koko, unokuyiprinta kwaye unike imifanekiso yemibala ngokusebenzisa izixhobo ezahlukeneyo zokubala umbala. Ungayichazanga, ungasebenzisa i-crayon, imibala yepensile, iimpawu zemibala okanye iipende.
Faka umbala kwinombolo ekwi-Intanethi
Okwesibini, unokusebenzisa umbala ngeNombolo ye-Intanethi efumaneka kwimidlalo okanye kwenye iwebhusayithi yokufunda. Njengoko besesitshilo ngaphambili, ungangena kwindawo kunye nokuzoba umzobo wakho womzobo. Nje ukuba igqityiwe, unokukhetha iMibala yeHala njengo-Skin Colour Hex kwaye uyisebenzise emfanekisweni. Sukuba nexhala! Umbala ngenombolo kwi-Intanethi ikuvumela ukuba ugcine umsebenzi wakho wangaphambili kwi-intanethi kwaye uprinte kwakhona.
Uyifikelela kanjani Umbala ngenombolo yokupeyinta kwakho?
Ngoku lixesha lokufikelela kumbala ngenombolo ekwi-Intanethi. Siyazi ukuba abanye bakho baqala le nkqubo. Emva koko, uya kudinga isikhokelo sokujongana nayo. Ngokungabikho kwama-prologues amaninzi, nantsi inyathelo ngenyathelo ukufikelela kumbala ngenombolo kwi-Intanethi:
Inyathelo 1 # Faka umfanekiso
Okokuqala, uyakwazi ukukhuphela umfanekiso kwimithombo eyahlukeneyo. Okanye, kulungile ukwenza umfanekiso wezo mifanekiso. Unokufaka okanye uhudule umfanekiso kwi-Colour ngeNombolo yokusebenzela kwi-Intanethi.
Inyathelo 2 # Nika iNkcazo
Okwesibini, kufuneka unike inkcazo yomfanekiso osewulayishe mva. Kule meko, ungasebenzisa amagama amahlanu okanye nangaphezulu kwaye uchaze onke amanqaku ngaphakathi komfanekiso wakho.
Inyathelo 3 # Khetha Imibala
Kwikamva elilandelayo, unokulufaka umbala kwinombolo esekwe kukhetho lwemibala yemibala. Ngokuqinisekileyo, kufuna ubuchule bakho ukwenza imifanekiso ibe mihle ngakumbi. Ngolwazi lwakho, kukho ezinye iinketho ze-Hex ezikwi-Intanethi eziya kumela umfanekiso wakho.
Inyathelo 4 # Bamba iqhosha lokuhambisa
Nje ukuba ugqibile umbala ngeNombolo yomsebenzi, unokubetha iqhosha lokungenisa kwaye ulinde okwethutyana ukufumana iziphumo. Kungadinga imizuzu emihlanu okanye elishumi ukwenza isiphumo sombala womfanekiso.
Inyathelo 5 # Jonga iziphumo
Ekugqibeleni, unokujonga iziphumo. Kweli candelo, kusimahla ukuba wonge umsebenzi wakho kwi-Intanethi okanye uwukhuphele. Okwangoku, umzobo wakho wangaphambili wokupeyinta ubonakala umtsalane ngakumbi ngenxa yoLusu lweHell Colour, umbala wePastel kunye neenkcukacha zombala.
Zisetyenziselwa ntoni ukufaka imibala kwi-Intanethi?
Ngolwazi lwakho, zimbini izinto ezilula onokuzisebenzisa ukufikelela kumbala ngenombolo kwi-Intanethi. Zombini ziya kunceda ekuchongeni eyona mibala mihle nelungileyo yemizobo yenu. Kwaye, Nazi ii -apps ezizezi:
Ekuqaleni, ungasebenzisa i-Colombia Inverter ukuzalisa umbala kumzobo wakho. Ngale nkqubo, ungaqala umbala ngenombolo kwi-Intanethi ngokusebenzisa Imibala efumaneka kwi-Hex ekwi-Intanethi kunye nezinye ii-RGB zokukhetha umbala wePicker. Ngokuqinisekileyo, unokufumana ingqokelela yemibala ye-pastel, ulusu lombala we-Hex kunye nezinye ezininzi.
Okwangoku, unokusebenzisa i-Scanner yombala ukuchonga ukuqokelelwa kombala kwemifanekiso osele uyilayishile. Kule meko, Faka umbala kwi-Scanner ekwi-Intanethi ukukubonisa isiphumo kwaye kukunike ithuba lokuyiguqula.
Uyifikelela njani i-Inverter yombala yokupeyinta?
Kukho amanyathelo athile okufikelela kumbala we-Inverter kwaye nantsi:
Ngena kwi-Colour Inverter App kwiPC yakho
Faka okanye utsale umfanekiso wesazobe
Khetha imibala kumacala athile emifanekiso
Cofa iqhosha lokungenisa
Uyifikelela njani i-Colanner Yombala wepeyinti?
Ke ngoku, nantsi imilinganiselo yokufikelela kwi-Scanner yoBala kwaye ufumane inkcazo yemifanekiso yakho, yile:
Ngena okanye ubhalise kwi-Colanner App kwiPC yakho
Ke, bafo! Lulwazi ngokubanzi malunga nombala ngenombolo ekwi-Intanethi. Ngoku, unokuziqhelanisa nokufaka umbala kwimizobo yomfanekiso wakho usebenzisa i-Collect Ininter okanye ungene kwi-Scanner yombala ukufumana inkcazo ngakumbi. Ungakulibali ukufaka umbala ofanelekileyo kwi-Hex kwi-Intanethi kuyo kwaye wenze umfanekiso wakho ubonakale ngakumbi. Qhubeka nokuhlola kwaye uhlale uyile!